အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးငွေစုနည်း (၃) မျိုး - CeleLove
February 13, 2020 CeleLove ဗဟုသုတများ 0
ငွေကြေးပြဿနာတွေကို သင် ဘာလို့ရင်ဆိုင်နေရလဲ သိပါသလား။ လကုန်တာနဲ့ လက်ထဲမှာ ငွေဘာလို့ မကျန်တော့တာလဲဆိုတာကိုကော သင်သိပါသလား။ အောင်မြင်သူတွေမှာ အများနဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ ငွေစုနည်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ စာချစ်သူတို့အတွက် အောင်မြင်သူတွေ လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ ငွေစုနည်း (၃) မျိုးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် …။
(1) ပထမဆုံးနည်းကတော့ အောင်မြင်သူတွေဟာ ငွေကို ရေတွက်ကြပါတယ်။ သာမန်လူတွေက လစာရတယ်။ ငွေစုတယ်။ ငွေသုံးတယ်။ အသုံးစရိတ်ကို မတွက်ချက်ဘူး။ အပိုဝင်ငွေ မရှာဘူး။ အလုပ်ရှိပေမဲ့ တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါ အခွန်အခတွေကြောင့် အကြွေးတွေတင်လာကြတယ်။ အောင်မြင်သူတွေကတော့ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပေးရမယ့်အခွန်အခတွေကို ပုံမှန်တွက်ကြတယ်။ ငွေကြေးကို စနစ်တကျ စီမံကြပါတယ် …။
– သင်ရော ဘဏ်အကောင့်ကို ဘယ်နှကြိမ်စစ်ဆေးဖြစ်ပါသလဲ?
– နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်တွေကိုရော တွက်ကြည့်ဖူးပါသလား?
– ဝင်ငွေတိုးအောင် ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာရော သိပါသလား? ဘာကို ဆက်လုပ်သင့်သလဲ?
– ဝင်ငွေတိုးမယ့် လမ်းကြောင်းတွေက ဘာတွေလဲ? ဒီမေးခွန်းတွေဟာ အောင်မြင်သူတွေ ကျင့်သုံးတဲ့ ပထမဆုံးငွေစုနည်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်တွေပါပဲ …။
(2) ဒုတိယနည်းကတော့ အောင်မြင်သူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အရင်ဆုံးလစာပေးကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လစာပေးတယ်ဆိုတာ ကားဝယ်တာ၊ အားလပ်ရက်ယူတာ၊ အပျော်အပါးအတွက် သုံးဖြုန်းတာတွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အတွက် ငွေကို သက်သက်ခွဲချန်ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ လူတော်တော်များများ ဖတ်ဖူးကြတဲ့ “ ဘေဘီလုံမှာ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ဝင်ငွေရဲ့ ၁ဝ%ကို ခွဲချန်ပြီး စုတတ်ဖို့ ပြောပြထားပါတယ် …။
ဒီနေ့ခေတ် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေကြောင့် အရာရာဈေးကြီးနေချိန်မှာ ဝင်ငွေရဲ့ ၁ဝ% စုနေရုံနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်လကို သင့်ဝင်ငွေ ဘယ်လောက်ပဲရရ၊ ဝင်ငွေများလေလေ ၁၅%၊ ၂ဝ%၊ ၃ဝ% စသဖြင့် အသီးသီးတိုးစုသွားရပါမယ်။ ပြီးတော့ သင့်ဝင်ငွေရဲ့% အနည်းဆုံးကိုပဲ သုံးစွဲပါ။ ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လစာပေးခြင်း ပါပဲ …။
(3) တတိယနည်းကတော့ အောင်မြင်သူတွေဟာ ဝင်ငွေတိုးရှာနိုင်မယ့် စွမ်းရည်ကို အဆက်မပြတ် တိုးတက်အောင် လုပ်ကြပါတယ်။ “တစ်လမှ ဝင်ငွေက နည်းနည်းပဲရှိတယ်။ အသုံးစရိတ်တွေက များလွန်းတယ်။ ငွေဘယ်လို စုနိုင်မှာလဲ။ ” လို့ သင်ကတွေးနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နှစ်စဉ် ငွေကို တိုးသထက်တိုးလာအောင် ခွဲချန်ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပါ။ ပြီးတော့ ဝင်ငွေတိုးအောင် လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို တိုးတက်အောင် လုပ်ပါ …။
ဒီစွမ်းရည်ကို ရဖို့ သင့်အရည်အချင်းတွေကို ငွေရှာတတ်ဖို့အတွက် ထပ်ခါထပ်ခါ အသုံးချပါ။ ဒါဆိုရင် သင့်ဝင်ငွေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးလာပါမယ်။ နှစ်စဉ် သင့်ဝင်ငွေတိုးလာတယ်ဆိုရင် သင့်မှာ ဝင်ငွေတိုးအောင် လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် တက်လာတာပါပဲ။ ဒါဟာ တတိယနည်းကြောင့် ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဖြစ်ပါတယ် …။
“ သင့်အနာဂတ်ကို မရွေးချယ်ပါနဲ့ …၊
သင်သုံးနေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရွေးချယ်ပါ …။
သင့်နည်းလမ်းတွေကပဲ သင့်အနာဂတ်ကို ရွေးချယ်ပေးပါလိမ့်မယ် …။”
ကဲ…သင်လည်း ဒီနည်းလမ်းလေး (၃) ခုနဲ့ ငွေကြေးပြဿနာတွေကို နုတ်ဆက်လိုက်ပါနော် …။ ။
ဤဆောင်းပါးကို ဂန္ထဝင်မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်သည် …။
အောငျမွငျသူတှရေဲ့ အကောငျးဆုံးငှစေုနညျး (၃) မြိုး
ငှကွေေးပွဿနာတှကေို သငျ ဘာလို့ရငျဆိုငျနရေလဲ သိပါသလား။ လကုနျတာနဲ့ လကျထဲမှာ ငှဘောလို့ မကနျြတော့တာလဲဆိုတာကိုကော သငျသိပါသလား။ အောငျမွငျသူတှမှော အမြားနဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ ငှစေုနညျးတှေ ရှိကွပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာ စာခဈြသူတို့အတှကျ အောငျမွငျသူတှေ လကျတှကေ့ငျြ့သုံးတဲ့ ငှစေုနညျး (၃) မြိုးကို ပွောပွပေးခငျြပါတယျ …။
(1) ပထမဆုံးနညျးကတော့ အောငျမွငျသူတှဟော ငှကေို ရတှေကျကွပါတယျ။ သာမနျလူတှကေ လစာရတယျ။ ငှစေုတယျ။ ငှသေုံးတယျ။ အသုံးစရိတျကို မတှကျခကျြဘူး။ အပိုဝငျငှေ မရှာဘူး။ အလုပျရှိပမေဲ့ တဈနှဈကွာတဲ့အခါ အခှနျအခတှကွေောငျ့ အကွှေးတှတေငျလာကွတယျ။ အောငျမွငျသူတှကေတော့ တဈနှဈတဈကွိမျ ပေးရမယျ့အခှနျအခတှကေို ပုံမှနျတှကျကွတယျ။ ငှကွေေးကို စနဈတကြ စီမံကွပါတယျ …။
– သငျရော ဘဏျအကောငျ့ကို ဘယျနှကွိမျစဈဆေးဖွဈပါသလဲ?
– နစေ့ဉျအသုံးစရိတျတှကေိုရော တှကျကွညျ့ဖူးပါသလား?
– ဝငျငှတေိုးအောငျ ဘယျလိုရှာရမလဲဆိုတာရော သိပါသလား? ဘာကို ဆကျလုပျသငျ့သလဲ?
– ဝငျငှတေိုးမယျ့ လမျးကွောငျးတှကေ ဘာတှလေဲ? ဒီမေးခှနျးတှဟော အောငျမွငျသူတှေ ကငျြ့သုံးတဲ့ ပထမဆုံးငှစေုနညျးမှာ ပါဝငျတဲ့ အခကျြတှပေါပဲ …။
(2) ဒုတိယနညျးကတော့ အောငျမွငျသူတှဟော သူတို့ကိုယျသူတို့ အရငျဆုံးလစာပေးကွတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လစာပေးတယျဆိုတာ ကားဝယျတာ၊ အားလပျရကျယူတာ၊ အပြျောအပါးအတှကျ သုံးဖွုနျးတာတှကေို ဆိုလိုတာမဟုတျဘဲ ကိုယျ့အတှကျ ငှကေို သကျသကျခှဲခနျြပွီး ရငျးနှီးမွုပျနှံထားတာကို ဆိုလိုပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြား ဖတျဖူးကွတဲ့ “ ဘဘေီလုံမှာ အခမျြးသာဆုံးပုဂ်ဂိုလျ ” ဆိုတဲ့ စာအုပျမှာ ဝငျငှရေဲ့ ၁ဝ%ကို ခှဲခနျြပွီး စုတတျဖို့ ပွောပွထားပါတယျ …။
ဒီနခေ့တျေ ငှကွေေးဖောငျးပှမှုတှကွေောငျ့ အရာရာဈေးကွီးနခြေိနျမှာ ဝငျငှရေဲ့ ၁ဝ% စုနရေုံနဲ့ မလုံလောကျတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ တဈလကို သငျ့ဝငျငှေ ဘယျလောကျပဲရရ၊ ဝငျငှမြေားလလေေ ၁၅%၊ ၂ဝ%၊ ၃ဝ% စသဖွငျ့ အသီးသီးတိုးစုသှားရပါမယျ။ ပွီးတော့ သငျ့ဝငျငှရေဲ့% အနညျးဆုံးကိုပဲ သုံးစှဲပါ။ ဒါဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လစာပေးခွငျး ပါပဲ …။
(3) တတိယနညျးကတော့ အောငျမွငျသူတှဟော ဝငျငှတေိုးရှာနိုငျမယျ့ စှမျးရညျကို အဆကျမပွတျ တိုးတကျအောငျ လုပျကွပါတယျ။ “တဈလမှ ဝငျငှကေ နညျးနညျးပဲရှိတယျ။ အသုံးစရိတျတှကေ မြားလှနျးတယျ။ ငှဘေယျလို စုနိုငျမှာလဲ။ ” လို့ သငျကတှေးနနေိုငျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ နှဈစဉျ ငှကေို တိုးသထကျတိုးလာအောငျ ခှဲခနျြပွီး ရငျးနှီးမွုပျနှံထားပါ။ ပွီးတော့ ဝငျငှတေိုးအောငျ လုပျနိုငျတဲ့စှမျးရညျကို တိုးတကျအောငျ လုပျပါ …။
ဒီစှမျးရညျကို ရဖို့ သငျ့အရညျအခငျြးတှကေို ငှရှောတတျဖို့အတှကျ ထပျခါထပျခါ အသုံးခပြါ။ ဒါဆိုရငျ သငျ့ဝငျငှဟော တဈနှဈထကျတဈနှဈ တိုးလာပါမယျ။ နှဈစဉျ သငျ့ဝငျငှတေိုးလာတယျဆိုရငျ သငျ့မှာ ဝငျငှတေိုးအောငျ လုပျနိုငျတဲ့စှမျးရညျ တကျလာတာပါပဲ။ ဒါဟာ တတိယနညျးကွောငျ့ ရလာမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးတှေ ဖွဈပါတယျ …။
“ သငျ့အနာဂတျကို မရှေးခယျြပါနဲ့ …၊
သငျသုံးနတေဲ့ နညျးလမျးတှကေို ရှေးခယျြပါ …။
သငျ့နညျးလမျးတှကေပဲ သငျ့အနာဂတျကို ရှေးခယျြပေးပါလိမျ့မယျ …။”
ကဲ…သငျလညျး ဒီနညျးလမျးလေး (၃) ခုနဲ့ ငှကွေေးပွဿနာတှကေို နုတျဆကျလိုကျပါနျော …။ ။
ဤဆောငျးပါးကို ဂန်ထဝငျမဂ်ဂဇငျးမှ ရေးသားတငျဆကျသညျ …။